Kulan looga hadlayay dilalka dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Toronto, sawiro – Mogadishutimes
Kulan looga hadlayay dhalinyarada isku disha Canada ayaa lagu qabtay magaalada Toronto. Waxaa barnaamijka soo qaban qaabiyay idaacada VOA, waxaana kasoo qayb-galay qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed.
Dhowr waxyaabood ayaa afka ku batay, dadka intooda badana ay isku raaceen. Waxaa dhibaato loo arkay in caruurta ay kusoo koraan guryaha dowlada ay bixiso, kuwasoo ah meelaha ugu badan oo ay caruurta ku bartaan dhaqan xumida.
Waxaa kale oo la tilmaamay in uu udub-dhexaadka qoyska burburay; taasoo sababta, in caruurtii aysan helin labada waalid oo guriga wada jooga. Tan ugu daran ee la isku wada raacay ayaa ahayd in system-ka wadanka uu dhibaateyay caruurta. Waxaa laga hadlay in dhalinyarada fiican aysan shaqooyin helin, marka la dilana aanan loo baarin sida dadka kale.
Dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa la dilay intooda badana waxaa dilay Soomaali kale. Tiro badan oo ka mid ah dilalkaas lama xalin dadkii dilayna weli waxay marayaan wadooyinka.
Intii uu show-ga socday ma jirin waalid sheegtay in caruur laga dilay ama caruur xabsi uga jiraan maxaa yeelay maha wax la sheegan karo bulshada dhexdeeda waa ceeb.